Gaaska cuntada lagu karsado oo ka go’ay Muqdisho. - Awdinle Online
Gaaska cuntada lagu karsado oo ka go’ay Muqdisho.
Gaaska ama Shidaalka cuntada lagu karsado ayaa ka go’ay shirkadaha bixiya adeegga Gaaska ee magaalada Muqdisho, ganacsato katirsan shirkadaha keena Gaaska ayaa u sheegay Warbaahinta in baahida iyo dalabka Gaasku kor u kacay intii lagu jiray Ramadaanka sidaas awgeedna ay Shirkaduhu bixiyeen Gaas ka badan kii ay bixin jireen bilihii ka horreeyey.
Qiimaha Gaaska lagu Isticmaalo guryaha oo ahaa 13KG oo gaas ah oo u dhiganta $22 Dollar ayaa Bartamihii Ramadaanka waxa uu gaaray $28 Dollar! Kaddibna Gaaska ayaa noqday gabaabsi ku noqday Shirkadaha qaarkood.
Xarumaha Shirkadaha Shidaalka ee magaalada Muqdisho ayaa ku sheegay in sababaha keenay go’idda Gaasku ay yihiin:
Cillad ku timid Markabka Gaaska Soomaaliya usoo waday
Baahida ama dalabka oo ka batay Shidaalka ay hayaan Shirkaduhu
Adeegsiga Gaaska oo kor u kacay si gaar ah Ramadaankii la soo dhaafay
Dhuxusha oo Qoyays badan ka guurayaan
Tiro-koob la’aanta Shirkadaha bixiya adeegga ka haysata Rukunka!
Inkasta oo aanay jirin cilmi-baaris rasmi ah oo kusaabsan sida adeegsiga Gaasku u yareyneyso Isticmaalka dhuxusha haddana geddisleyda Gaaska ayaa u sheegay Mustaqbal in isu dhowaanshaha Qiimaha Gaaska iyo Dhuxushu ay sababtay in Isticmaalka Gaasku ka bato kan Dhuxusha maaddaama adeegsiga Gaaska ku fiican yahay Nadaafadda, Dhaqsida iyo bedqabka Guryaha.